Madaxweynaha Somailand Oo Kulan La Qaatay Shirguddoonka Golaha Wakiillada. - Xogside
Home WARARKA DALKA SOMALILAND Madaxweynaha Somailand Oo Kulan La Qaatay Shirguddoonka Golaha Wakiillada.
Madaxweynaha Somailand Oo Kulan La Qaatay Shirguddoonka Golaha Wakiillada.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxa uu qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay shirguddoonka golaha wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha golaha wakiilladu, Mudane Cabdirisaaq Khaliif Axmed.
Kulankan oo ah kii u horreeyey ee ay rasmi u yeeshaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo shirguddoonka cusub ee golaha wakiilladu ayaa lagu lafo-guray hannaanka wada shaqayneed ee ka dhexeeya golaha sharci dejinta iyo xukuumadda.
Waxaana kulankaa madaxweynaha ku wehelinaayey wasiirrada wasaaradaha xannaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga, mudane Siciid Sulub Maxamed iyo xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka, mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi.
Dhinaca shirguddoonkana waxa gudoomiyaha ku wehelinaayey gudoomiye ku xigeenka koowaad, Mudane Siciid Mire Faarax iyo guddoomiye ku xigeenka labaad mudane Cali Xaamud Jibriil.
Previous articlexukumo noqday kuwa dadka raali galiyay
Next articleWasaaradda Caddaaladda Somaliland oo Tababar u Furtay Xubno Ciidanka Asluubta ah
Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda Somaliland oo kulan xog-warraysi ah la Yeeshay masuuliyiinta u sarraysa Hay’adda UNSOM ee Somaliland
Golaha Guurtida oo Ajandaha Qodobkiisa waxbarashada ka saaray Xal u helida korodhka lacagta laga qaado ardayda dugsiyada gaarka loo leeyahay.